Lalao Androidsis COOL amin'ny volana Jolay: Marco the Inked Cat | Androidsis
Marco el Gato Inintado dia fialamboly vaovao ho an'ny finday izay nahazo ny loka voalohany amin'ny lalao COOL Androidsis tsara indrindra tamin'ny Jolay. Izy io dia noho ny hatsarany, ny traikefa nahafinaritra izay toa manoritsoritra lamba eo ambony latabatra fanaovana sary isika ary noho io fizika misy ireo zavatra izay "mandoko" sary an-tsary amin'ny fomba tsara io.
Lalao efa voadinika tsara ananantsika amin'ny Espaniôla ka iray amin'ireo tsara indrindra ny traikefa. Miaraka amin'ity andian-dahatsoratra ity, nandresy ny fonay kely miaraka amin'ny enti-mody vita tsara sy saka mahafatifaty antsoina hoe Marco. Avia fa azony daholo.
1 Kilalao tsotra, fa manintona anao izany
2 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
2.1 Ny tsara indrindra
2.2 Ratsy indrindra
Kilalao tsotra, fa manintona anao izany
Miaraka amin'ny ambaratonga 36 mety tsy dia manana lalao firy isika, fa ireo an-tananay miaraka amin'i Marco saka Inked kosa dia mihoatra ny ampy mba hankafy ny fahafaham-po sisa tavela rehefa mandoko amin'ny loko isan-karazany isika, borosy izay sokafantsika ary ireo saka kely manampy antsika amin'ny asa fandokoana.
Amin'izany fomba izany no fandokoantsika ireo endri-tsoratra sariitatra ireo mandra-pahatongan'ny 100% ny tavoahangy ranomainty na rehefa hitantsika fa nolokoina ny toerana rehetra. Mandeha amin'ny loko manaraka isika ary tsy maintsy mandeha any amin'ilay faritra handoko azy. Amin'izany no hamenoantsika ny fandokoana ny sary hankafizintsika amin'ity lalao ity.
Tsy misy zavatra hafa ankoatry ny atiny ahafahantsika mamoha mba hahafahantsika manana borosy bebe kokoa, ampanjifaina ny saka na hanova ny boky firaketana izay handolorantsika loko ireo endri-tsarimihetsika rehetra ireo.
Ny lalao dia niasa tsara tamin'ny lafiny rehetra ary miaraka amin'ny antsipiriany marobe toy ireo takelaka ireo amin'ny ambaratonga izay andalovantsika aorian'ny nahavitanay ny iray. KOA mifikitra amin'ny mozikany izahay nanomboka tamin'ny taona 20 ary mampahatsiahy antsika, toy ny amin'ny ambaratonga ankapobeny, ireo sehatra PC lehibe antsoina hoe Cuphead.
Lalao mahafinaritra izay atolotray ampahibemaso ary izany dia nandresy mba ho lalao mahafinaritra an'ny Androidsis ny volana Jolay; tsy ianao malahelo tamin'ny volana lasa. Manana izany maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ianao hahafahanao manampy an'i Marco handoko ireo tarehin-tsoratra rehetra ananany eo alohany. Oh, ary manana dokam-barotra izy io, saingy tsy misy manelingelina; tampoka, jereo ity video ity raha mila torohevitra hafa ianao.
Ny lalao COOL amin'ity volana ity dia mandresy noho ny hatsarany, amin'ny famelana antsika hisarika sy amin'ny fiteny Espaniola.
Sary miloko sy sary
Ireo zanany izay miaraka aminay
Tonga lafatra amin'ny fahitana amin'ny sary mihetsika mahafinaritra
Raha nanana ambaratonga bebe kokoa aho ...
Tabilao: saka maratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao Androidsis COOL amin'ny volana Jolay: Marco the Inked Cat
Inona ireo fitaovam-piadiana 'XT' vaovao ary inona ny fanatsarana entin'izy ireo amin'ny PUBG Mobile?